Mkpụrụ obi: ihe ị kwesịrị ịma banyere igwe ndị a | Akụrụngwa n'efu
Mkpụrụ obi: ihe ị kwesịrị ịma banyere moto ndị a
Isaac | | Ihe eletrọniki, drones
Eleghị anya ị nụrụ banyere moto brushless. Ọ dị njọ ịhụ okwu a n'ọtụtụ nkọwa ngwaahịa. Dịka ọmụmaatụ, na drones ị nwere ike ịhụ na ọtụtụ nwere ụdị igwe eletrik. N'ezie, ụfọdụ ndị nrụpụta na-eji ya dịka azịza maka ndị ahịa ha, n'ihi na ha nwere uru ha.
Ma gịnị bụ moto a na-enweghị ahịhịa? Kedu ọdịiche dị na ya gbasara ụdị ndị ọzọ nke moto DC. Ọfọn ndị niile ahụ obi abụọ na ndị ọzọ m ga-anwa ịkọwa ha n'isiokwu a ...
Dị ka ụdị ndị ọzọ nke Ihe eletrọniki, ndị a Motors nwere ike seamlessly ike na gị Mee N'onwe Gị oru ngo na arduino osisi na ndị ọzọ
1 Kedu ihe bụ moto na-enweghị afụ ọnụ?
1.1 Akụkụ nke moto na-enweghị brush na ọrụ
2 Ebe ịzụta moto na-enweghị brush
Kedu ihe bụ moto na-enweghị afụ ọnụ?
Akụkụ moto moto
Ndochi brushes maka brus moto
Un moto na-enweghị brush, ma ọ bụ moto na-enweghị brush, Ọ bụ igwe eletriki igwe eletrik dị ugbu a, mana ọ naghị eji brushes iji gbanwee polarity nke moto ahụ. Nke a na - egbochi ụfọdụ nsogbu ọrụaka ma gbochie ha iji dochie anya ha. Ọ bụ ya mere eji ya dịka nkwupụta, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ bụ nkwupụta dị ntakịrị, ebe ọ bụ na ọtụtụ motọ dị ugbu a anaghị enwe ntụpọ.
na moto eletrik ochie Ee ha nwere ụdị brushes a, ụfọdụ ihe dị iche iche na-ete ma yabụ belata arụmọrụ nke moto ahụ site na esemokwu, mepụta okpomọkụ dị elu, akwa, mkpọtụ, ma chọọ mmezi a iji hichaa ikuku carbon nke emepụtara n'ime moto ahụ (nke nwere ike ọ bụghị naanị na-egbochi ọrụ, ọ nwekwara ike ịbụ conductive na-eduga nsogbu eletriki) na-anọchi eyi brushes.
Ọ bụ ya mere eji mepụta moto izizi mbụ. Nke mbụ n'ọhịa nke asynchronous AC moto, na emesia na-eme ka ntopute ahụ na moto ndị ọzọ dị ka DC, nke bụ ihe masịrị anyị kachasị na blọgụ a.
Ọ bụ ezie na ibido Ha dị ọhụụ ma dịkwa oke ọnụ Iji mepụta, ọganihu nke teknụzụ na elektrọnik emeela ka ọ nwee ike ịmịpụta ha n'ụzọ akụ na ụba. Otú ọ dị, njikwa ya nwere ike ịdịtụ mgbagwoju anya. Ọ bụ ezie na ndị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ewepụla nsogbu ndị a ...
Ka ọ dị ugbu a, moto AC nọ na ìgwè ìgwè ulo na ulo oru ulo oru, tinyere ugbo ala, wdg. Banyere CCs, ị nwekwara ike ịchọta ha na ndị na-agụ diski anya, ndị na-egwu kọmputa, drones, robots, na ogologo wdg.
Akụkụ nke moto na-enweghị brush na ọrụ
Eziokwu bụ na akụkụ ahụ nke moto na-enweghị brush dị mfe. Na stator nwere magnetik ọta kọwara na isiokwu na electric Motors, na a rotor ga-bugharia n'ihi na mkpali nke magnetik.
Ma ụzọ iji rụọ ọrụ ha ee ọ dị obere dị iche na nke ọzọ bupụrụ DC na moto AC. Agbanyeghị, ọtụtụ ụkpụrụ ọrụ yana atụmatụ ga-abụ otu.
Iji mee ka ihe dịkwuo mfe, ndị ESC (Electronic Speed ​​Controller), ya bụ, ndị njikwa ga - enwe ike ịgbanwe polarity nke windings nke moto na - enweghị ntụ iji chịkwaa ntụgharị. Ha na-ekwe mfe akara site PWM, na microcontrollers dị ka nke dị na bọọdụ Arduino.
Ngwa ESC nwere ihe elektrọnik nwere ike ịme ihe na moto na-enweghị nsogbu dị ukwuu maka onye ọrụ. Dabere n'ụdị injin na ike ị ga-achọ otu ụdị ma ọ bụ nke ọzọ ọkwọ, dị ka anyị tụlerela n'isiokwu ndị ọzọ.
Cheta na ị nwedịrị ike iji ya MOSFET transistors ilekọta ya ma ọ bụrụ na ịnweghị modul nke ndị a. Ihu ọma a ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ ESC bụ a sekit na-enye ohere ọzọ ọzọ polarity nke transistors ịgbanwe ike ọkọnọ polarity nke moto ekele na transistors na-ide ya.
n'etiti na uru nke isi ihe na-enweghị isi:
Nsonaazụ ọsọ ọsọ kacha mma. Yabụ, ịnwere ike iwepụtakwu arụmọrụ na ha.
Nzaghachi ka mma.
Inwekwu ume ike, iji chekwaa ume. Karịsịa mkpa na batrị kwadoro ngwaọrụ.
Obere ekpo oke ọkụ. Enweghị mkpa maka sistemu mgbasa ọzọ ma ọ bụ iyi akwa.
Ọ ga-adịgide adịgide, n'ihi na ọ chọghị nlekọta dị ukwuu, ọ nweghịkwa esemokwu ma ọ bụ eyi akwa.
Obere mkpọtụ. Ha na-adị jụụ karị site n'imetụghị ihe ọ bụla aka.
Ọsọ dị elu, ezigbo maka ngwa ebe ọ dị mkpa, dị ka ịgba ọsọ drones.
Kọmpat N'agbanyeghị torque ha nwere, ha bụ ọtụtụ kọmpat ihe ndị ọzọ ịbụ hà karịa a leghaara moto.
Na-enweghị mmezi. You gaghị enwe ohere na-ekwesịghị ekwesị n'ihi iyi nke brushes, ma ọ bụ ịzụta akụkụ ahụ mapụtara, hichaa ájá ahụ mepụtara, wdg.
N'ezie, moto na-enweghị ahịhịa adịghị mma n'ihe niile. Ha nwere umu-ntakiri-ha adịghị ike:
Ọnụ, ọ dị ntakịrị karịa motọ brush. Otú ọ dị, nkà na ụzụ dị ugbu a pụtara na ị nwere ike ịzụta moto na-enweghị brush na ọnụahịa dị mma.
Iji chịkwaa ya, ị ga-achọ ndị ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ ndị njikwa ka ị nwee ike ijikwa ntụgharị. Ọ gaghị ekwe omume iji aka gị mee ya dịka ọ dị na ọnọdụ ndị ọzọ.
N'agbanyeghị nke ahụ, ha bụ ndị ahụe nyekwara ụlọ ọrụ ahụ iwu na ọ na-eme ya bara uru ịhọrọ otu n'ime ha ...
Ebe ịzụta moto na-enweghị brush
Nke ikpe azu, oburu na ichoro zụta ugbo ala ịrụzi gị drone, ma ọ bụ n'ihi na gị rụrụ oru ngo, ị pụrụ ịchọta ha na pụrụ iche na-echekwa ma ọ bụ na Amazon. Iji maa atụ, lee ụfọdụ ngwaahịa:
4x Brushless moto maka DroneAcc drones
Viviance Brushless Motor maka Skateboard / Electric Bike
Alomejor Brushless moto maka skateboard / igwe eletriki
12v 150w brushless moto
Crazepony-UK Brushless mmiri
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Mkpụrụ obi: ihe ị kwesịrị ịma banyere moto ndị a
Faston: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe ndị a
NVIDIA Jetson Nano: SBC maka mmepe na netwọkụ ntanetị na AI